Ezigbo egwu maka nkwupụta maka Ụmụ nwanyị
Rites maka Nkwupụta - mmemme ndị a ga-eme maka Nkwupụta maka ọganihu na ọganihu?
Ebe ọ bụ na n'oge ochie, ndị mmadụ ejirila ezumike ememe okpukpe maka ememe dị iche iche bụ ndị jikọrọ ọdịnala ndị ọgọ mmụọ. N'ebe ndị mmadụ na-azụ ahịa, ọ bụ ọtụtụ ụdị ememe ndị ga-enyere aka mee mgbanwe n'ọnọdụ dị iche iche nke ndụ.
Rites maka Nkwupụta nke Virgin Mary gọziri agọzi
A kwenyere na ememme a nke eluigwe na-emepe eluigwe, ya mere, a ga-anụ arịrịọ niile a zitere gaa Elu Elu. Ememe ndị a na-eme maka Ememme ahụ gụnyere ime ihe ọtụtụ iwu:
Ọ dị mkpa na ọ dịghị onye maara banyere iji anwansi, ma ọ bụghị ihe si eme ememe agaghị adị.
Maka ọchịchọ a chọrọ ịghọ ezigbo, ọ dị mkpa ikwenye n'ihe omume na ike ha.
Ọ dị mkpa ịmepụta ọnọdụ kwesịrị ekwesị site na ịkwụsị ngwaọrụ eletriki niile ka ha ghara ịdọpụ uche ma ghara ịkụda ike.
Enwere ike imeghachi ihe ọ bụla maka nkwupụta ahụ kwa afọ, na-ewusi mmetụta nke onye gara aga.
Jide n'aka na ị na-ahụ ihe niile a na-eme n'ememe ma ghara ịgbanwe okwu ndị dị na nkwekọrịta.
Akara maka nkwupụta banyere ọganihu
Iji mee ememe iji nweta ihe onwunwe, ọ dị mkpa ka ị kwadebe maka ụbọchị atọ tupu ezumike ahụ. Ọ bụrụ na di na-enye ego ahụ, nwanyị ahụ na-eme ya nche. A na-emepụta akụnụba maka nkwupụta ahụ dị ka atụmatụ ndị a:
Were otu ihe na-acha ọcha nke ụdị udi, ihe na-acha uhie uhie na akwukwo nke clover, nke bụ otu n'ime akara ego ego. Ma mkpa osisi oak, nke na-etinye obi ike na ike, na wormwood ọlaọcha - ihe nnọchianya nke ahụ ike.
Osisi niile na-etinye akwa akwa, na-anakọta nsọtụ ma kee ha na eriri, nke mere na nsonaazụ bụ akpa. O di nkpa ime ato ato.
A ghaghị itinye ihe amulet dị njikere ka ọ bụrụ ogwe isi. Mgbe ị na-agbanwe akwa ákwà akwa, ị kwesịrị ịlele ọnọdụ nke akpa ahụ. Ọ bụrụ na ọ ghọrọ odo ma funahụ ísì ahụ, ọ pụtara na ọ rụrụ ọrụ ya ma chọọ ka ọkụ gbaa ụlọ.
Rites maka Nkwupụta maka Alụmdi na Nwunye
Ọtụtụ ndị na-enwe mmekọahụ na-enwe nsogbu n'ihi eziokwu ahụ bụ na ogologo oge apụghị ịhazi ndokwa onwe onye ma gaa n'okpuru okpueze ahụ. Enwela obi nkoropụ, n'ihi na e nwere ememe ndị inyom maka Nkwupụta, nke nwere ike ịgbanwe ọnọdụ maka mma. Iji lụọ na nso nso, gbasoo ntụziaka a:
Were ọka ole na ole a na-ekwesịghị ikpochapụ.
Ya na ya, ị ga-aga ọrụ ụka, bụ mgbe a na-agbanye ọka ahụ n'obi. Ịlaghachi n'ụlọ ọ dị mkpa ka ị ghara ịgwa mmadụ ọ bụla.
A ghaghị ịwụsa ụlọ ọka n'ọnụ ụzọ, na-ekwu nkwekọrịta pụrụ iche.
Okpokoro ihe ubi kwesiri idi n'ebe ahu ruo otu izu, mgbe ah u, a ghaghi itukwasi ya n'osisi ahihia mgbe nile.
Blagoveshchensky dị maka alụmdi na nwunye na- egosi na ọnọdụ ahụ na ndụ ya ga-agbanwe na ọdịdị nke na-epulite.
Ntughari nke nkwuputa ihu n'anya
Ụmụ agbọghọ nwere ike iji ememe dị mfe mee ka ụmụ mmadụ mara mma ma mee ka ha nwee ohere izute onye ezi mmadụ. Ememe ememe ndị a dị mfe ma maka otu n'ime ha ọ dị mkpa ịrụ ọtụtụ omume:
Ke usenubọk ke ama edemede, saa na mmiri atọ. Onye nke mbu - onye na - enweghị ebe obibi site na mgbata, ya bụ, tupu nke ahụ ọ dịghị onye ga - emeghe ya. Na nke abụọ, ịkwesịrị ịgbakwunye mmanụ elu, na nke atọ - mmiri dị nsọ . Ichapu kwesịrị ịbụ ọnụ ọgụgụ nke uwe elu ya.
Iji nọgide na ememe nke nkwupụta na ọ dị mkpa itinye akwa akwa, mee ncha na edozi isi, ma gaa n'èzí ruo mgbe ehihie na ụkwụ aka ekpe.
Ọ dị mkpa iji osisi nke osisi ọ bụla nke akụrụ pụta. O kwesịrị imetụ di na nwunye na-ahụ n'anya n'anya ma ọ bụ susuo ọnụ. E kwesịrị itinye ụlọ ọrụ na ụlọ na mgbe akụrụ na-agbaze, ọnọdụ nke ndụ ha ga-agbanwe.
Akara maka ịtụrụ ime nwa na Annunciation
Ebe ọ bụ na nne nke Chineke bụ isi nne maka ndị kwere ekwe bụ ndị nyere Onye Nzọpụta ụwa, Nkwupụta ahụ bụ oge kachasị mma iji mee ememme maka inwe ihe ịga nke ọma. A na-atụ aro na ị ga-aga n'ụlọ nsọ ma kwupụta na ị ga-emerụ onwe gị nke enweghị ike.
A ghaghị imezi oge maka nkwupụta banyere ime afọ mgbe a kwalitere nkwadebe na maka ememme a na-enye ya dị mkpa iji zụta nduru ọcha n'ụbọchị ahụ. Nnụnụ ahụ aghaghị ịnọ n'ụlọ n'abalị.
A ghaghị ịdọta ya na arịrịọ iji gosi Mmasị Kachasị ọchịchọ maka nwatakịrị. I nwekwara ike ide ederede na-egosi mmekọahụ, agba anya, àgwà na ihe ndị ọzọ nke ọdịnihu nwa.
N'isi ụtụtụ, a ga-atọhapụ nduru ahụ na mbara igwe, tinye ihe edetu na ọnụ ọnụ ya.
Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ dị mkpa ka ị pụọ n'èzí ma gbalịa ịchọta nwa kuru ime, nke ị ga-akụ, wee jide aka gị na afọ gị.
Ndi mmadu na-ekwuputa okwu banyere ahuike
A na-eme ememme ndị a chọrọ iji kpochapụ ọrịa ndị dị ugbu a ma mezie ọganihu. Ememe anwansi nke Annunciation nwere ike dị ukwuu, n'ihi ya site n'enyemaka ha, ị nwere ike inyere aka ọ bụghị naanị gị onwe gị, kamakwa ị ga-emechi ndị mmadụ.
Ọ dị anyị mkpa inweta mmiri na echi ma soro ya gaa ụka maka ọrụ ụtụtụ. Mgbe ọ gasịrị, laghachi n'ụlọ, ọ bụ inye ndị mmadụ atọ nọ ná mkpa ebere.
N'ụlọ na-asa ahụ iji wepụ ihe ọjọọ ahụ, mgbe ahụ, wụsara onwe gị na Mmiri nkwupụta mmiri.
Mgbe nke ahụ gasịrị, ịkwesịrị ịkwado ike dị mma, enwere ike ime ya n'ụzọ dịgasị iche iche, dịka ọmụmaatụ, ikiri egwu, ime ihe kachasị amasị gị, ịga ije na ihe ndị ọzọ.
Rites maka Nkwupụta banyere ọganihu na ọrụ
Iji meziwanye ọnọdụ ego gị, chọta ezigbo ọrụ ma dozie nsogbu ndị ọzọ, na-enweghị ọganihu i nwere ike ime. N'ihi nke a, ọ dị mkpa ịmara ihe ememme na-eme na nkwupụta ahụ, otu n'ime ihe ndị kasị dị irè gụnyere nkwadebe nke ọkwa pụrụ iche Annunciation nnu. N'ututu ụtụtụ, buru mbadamba tebụl nnu ma wụsa ya na akpa akwa. Tinye ya na oven nke dị tupu ihe dị ka minit 10. A na-eji nnu mee ihe nnu maka nri ma jiri ya na ememe iji wepu spoilage ma hichaa ụlọ ahụ.
Eziokwu banyere Udo na Ezinụlọ na Nkwupụta
Ọtụtụ ndị lụrụ di na nwunye mgbe ha na-ebikọ ọnụ ọnụ na-enweghi nghọtahie, na-ese okwu mgbe niile ma na-eche nsogbu ndị ọzọ ihu. Ọtụtụ mgbe, mgbanwe ndị dị otú ahụ na-adịghị mma na-eduga ná ndị ezinụlọ na-ekpuchi. Iji zere ọnọdụ dị otú ahụ, ọ ga-abara gị uru ịmara usoro ememme maka Nkwado Nkwupụta ahụ iji weghachi udo na ịhụnanya maka di na nwunye. A na-eji ememe a na-eme ememe na Russia n'oge ochie:
Kwadebe ọka ole na ole na-acha ọka wit, nke a ga-etinye na nri abalị a kwadebere maka di ma ọ bụ nwunye. Iji mee ka amara nke ọma na-arụ ọrụ, ọka dị mkpa iji na-aga n'ihu na okwu. Gwa ya banyere nsogbu na ahụmahụ gị. Mgbe nke a gbanye mmiri, si otú ahụ wepụ ihe ọjọọ niile.
Ọzọkwa, gbanye mmiri ma gwa ha okwu ọma. Dịka ọmụmaatụ, kọọrọ m ihe mere ị ji hụ nwunye gị n'anya, ihe ịchọrọ iji nweta mmekọrịta ma gosipụta ọchịchọ gị.
Ọ dịghị mkpa na onye òtù ọlụlụ ahụ riri mkpụrụ, ebe o zuru ezu na ha ejiriwo ike ha kwụnye efere ahụ. Mkpụrụ kwesịrị ịnọ na efere mgbe a na-eri nri na tebụl.
Dị ka nkwupụta ahụ iji mezuo ọchịchọ ahụ
Na ezumike ukwu nke ndi Kristain, onye obula nwere ohere ikwuputa ike nke elu karia ochicho nke ichota nrọ ha huru. Ọ dị mkpa na o nweghị ihe ọjọọ na-eche na ọ dị oke njọ, ma ọ bụghị na ị nwere ike nweta ihe na-akpata. Ịchọta ihe ememe ndị a ga-eme maka Nkwupụta ahụ, ọ bara uru ikwu banyere ememe nke na-enye aka imezu ọchịchọ ahụ a hụrụ n'anya. A kwenyere na taa, onyeisi mmụọ ozi Gebriel na- agbadata n'ụwa, ọ na-anụkwa arịrịọ nke ndị niile kwere ekwe.
A ga-eji ememe dị nsọ nke nkwupụta ahụ mee ya na obe n'elu ahụ. Ime ememe ahụ na-esote mgbe chi bọrọ.
Gaa n'okporo ámá ma chee ihu n'ebe ọwụwa anyanwụ. Ugboro atọ na-agafe onwe gị, kọọkwa nkata pụrụ iche.
Rites maka azụmahịa na Annunciation
A na-eme ọtụtụ ememme iji melite ọnọdụ nke ihe na azụmahịa, ịmepụta nsogbu na-adọta ndị ahịa ọhụrụ. Ndị nwe na ndị na-ere ere nwere ike ịme maka nkwupụta maka ahịa na ụlọ ahịa ahụ. Ememe a na-eme n'ihu dị irè naanị otu ugboro, ọ na-enyekwa mmasị nke ngwaahịa ma ọ bụ na-enyere aka inweta uru site na azụmahịa ahụ. Mgbe chi bọrọ, mee ka otu chọọchị kpochapụ kandụl wee gụọ ugboro itoolu na-agba izu otu teaspoon shuga. Tinye ya na obere akpa ma zoo ya na mgbochi ka ọ dọta ndị ahịa.
Kedu ihe nne ochie na-enye onye nkuzi?
Ebumnuche ịchọrọ onye a hụrụ n'anya
Privorot na ihe
Mkpakorita ahụ ịlụ
A na-eji ọnwa ọnwa na-ebelata
Ememe Agbamakwụkwọ nke Akwụkwọ Nsọ
Kedu ihe bụ òtù?
Ward nke ndị ọjọọ
Akara maka ego maka Afọ Ọhụụ
Ugwu oyi 2015-2016
Ụbọchị ọmụmụ ụbọchị ọmụmụ - Ezi ntụziaka
25 oghere na-achọ ka ọrụ nkà
Ebe iri abia iri abuo iji gbaa usoro "Egwuregwu nke oche eze"
Ụlọ dị n'ụdị elu
Ụjọ! A mụrụ nwa ahụ "ejima nwoke" dị ime!
Nzukọ nke klas akụ na ụba
Kedu mgbe afo na-ada tupu ị mụọ ụmụ oke?
Lentils - ọma na ihe ọjọọ
Anụ ezi anụcha - nri ntụ ọka kachasị mma na oven na multivark
Capsules maka ịsa
Okpokoro Utu Okpokoro 2013
Kylie Minogue ọzọ na ịhụnanya
Gịnị mere nrọ ji agba ụra?
Onye na-edozi ntutu isi sitere n'ike ihe ọ bụla ọ na-ahụ gburugburu, ọrụ ya dịkwa nnọọ mma!